Calaamadaha Lagu Garto Dumarka Xiliga Galmada rabaan | Gaaloos.com
Home » galmada » Calaamadaha Lagu Garto Dumarka Xiliga Galmada rabaan
Calaamadaha Lagu Garto Dumarka Xiliga Galmada rabaan
Damac marka aynu ka hadalno waa dareen naf waliba ku beerma waqtiga ay wax daneeneyso, Damaca dumarka waa waqtiga gogol dareenida waa kuwa kala gadisan .
Hadaba dumarka oo siyaabo kala gadisan u dareema Dareenka raaxada ayaan soo qaadanaynaa sedex qodob oo lagu dareemo in haweeneydu damac ku jiro.
Haweenka oo lagu dareemi karo in damac ku jiro iyadoo bilaawda kaftan fara ka tuur ah kaasoon kala jeedno in haweeneydu aad ula kaftanto seeygeeda waliba gacmaha ku taag taagto si uu u gardareesto halkaasna wax badan sahal ku ahaadaan.
Sidoo kale waxaa haweeneyda lagu dareemaa in damac ku jiro iyadoo is badal ku sameeysa hoygeeda , carfisa kala hagaajisa si looga dareemo isbadalka ay sameesay .ugu danbeen isbadalkaasi waa mid iyada laga dareemo taasoo nafsad ahaanteeda xirata dhar bilicdiisu wanaagsantahay, laga dhex arki karo qeybo kamid ah jirkeeda asal ahaantiisana qafiif ah.
Dabcan waxaa hubaal ah in Ninka Ragga ahi dareemi karo ruux damac ku jiro , waxaase muhiim ah inaad ogaan kartid jawiga ay markaasi ku sugantahay xaaskaaga waxaase kula gudboon inaad haba yaraatee aad qanciso si nolosheedu farxad ugu soo dabaasho, waana suura gal qancintaas in haweenku usahasho iney kuu qalbi furnaato hadalkaagana unugul naato
Title: Calaamadaha Lagu Garto Dumarka Xiliga Galmada rabaan